Ungabusa kanjani uhlu lwe-Amazon yokuthengisa ohlwini?
i-Amazon iyona enkulu kunazo zonke e-commerce portal emhlabeni. Usuku ngalunye izigidi zabantu zithenga kule platform, ukukhulisa imali yabathengisi ngabanye kanye nenzuzo enkulu ye-Amazon. Ukukhulisa uhlu lwakho lokuthengisa lwe-Amazon ohlwini lwamiphumela yosesho lungandisa kakhulu ukubonakala komkhiqizo wakho nokukhulisa imali. Mhlawumbe indlela engcono kakhulu yokuthuthukisa ukuthengisa isigaba ukudayisa imikhiqizo engcono kakhulu eklasini ngenani elifanele - gonfiabili milano bambini. Ngaphezu kwalokho, imikhiqizo yakho kufanele ibe njalo kusitokisini. Ezinye izici zesimo ezifana nesipiliyoni sokusesha somsebenzisi omuhle kakhulu, ukuthunyelwa okusheshayo, nokulethwa kuxhomeke kuwe kuphela. Lezi zinto eziyisisekelo zizosebenza njengezindlela ezizinzile kunazo zonke zokuba khona kwakho kwe-Amazon okuqinile.
Nokho, ngaphandle kwegoli lokuthengisa eliyisisekelo, kuneziphakamiso ezengeziwe okufanele uziqaphele. Kulesi sihloko, sizoxoxa ngezindlela okufanele uzame ukuthuthukisa isu lakho lokukhulisa isikhundla sakho sokuthengisa.
Izindlela eziwusizo zokulawula uhlu lwe-Amazon sales rank
Uma ungathanda ukukhulisa ukuthengiswa kwakho ku-Amazon, ukuhluka okuphelele kuyoba ukusebenzisa imithombo eyengeziwe yemigwaqo njengemiphakathi yokusebenzisana. Kukhona imiphakathi eminingi yesikhulumi kuma-Amazon abathengi abahlola amadili futhi banikeze abanye iseluleko lapho bangenza khona okuhle. Amalungu omphakathi anjalo ahle kakhulu ekutholeni izinto ezinhle kakhulu ngentengo enengqondo. Laba bantu bazothola amaphutha amanani, noma yikuphi ukukhushulwa, namathuba. Ungalahlekelwa nethuba lakho lokuthengisa okuningi futhi ube yilungu lomunye wemiphakathi ethintwayo ethintwayo. Qinisekisa ukuthi izaphulelo zakho zibalulekile ngokwanele ukwenza abathengisi bezinkontileka baziqaphele. Uma imikhiqizo yakho inekhwalithi ephezulu futhi inenani elihle, uzokwazi ukugcina ukuthengisa okusheshayo nokusheshayo.
Njengoba usuqaphele, imikhiqizo edayisa kakhulu ihlale ibeka ekhasini le-TOP of Search. Kungachazwa ngenhloso eyinhloko ye-Amazon yokwandisa imali. Ngakho-ke, imiphumela yakho edayisa kangcono, ephakeme uma uvela emiphumeleni yosesho, okuholela ekuthengiseni okungaphezulu. Ngokusho kwe-Amazon usezingeni le-algorithm elilawulayo, indawo yomkhiqizo ngamunye kwimiphumela yosesho ihlanganiswa ngehora. Ngakho-ke, noma ngabe into yakho iphakanyisiwe phezulu ngaphakathi kwesigaba sakho, akusho ukuthi kuzobekwa ku-TOP of Amazon ukucinga ngemigomo ehlobene.
Ukuguqula lesi simo futhi ngokuthinta kakhulu izinga lakho lokuthengisa le-Amazon ohlwini lwemiphumela yosesho, udinga ukusebenzisa izindlela ezingokoqobo zokuduna i-sales rank. Ake sixoxe ngezinye zazo.
Isici esibucayi emikhankaso yakho yokuthuthukisa i-Amazon ngucwaningo lwegama elingukhiye. Udinga ukuthola amagama angukhiye abalulekile afana nomsila omude abasebenzisi abasebenzisa ukuthola umkhiqizo wakho. Ungathola le datha usebenzisa uhlelo lwe-Amazon Sales Central noma i-Amazon Retail Analytics. Ngaphezu kwalokho, kungenzeka ukusebenzisa i-Google Amathrendi yedatha yokusesha iwebhu njengommeleli obuthakathaka uma kunesidingo. Uma usuqedile uhlu lwamagama afaneleko wokusesha, udinga ukucwaninga ku-Amazon ngenxa yemigomo yakho ephezulu. Thola umkhiqizo wakho ekhasini lomphumela wosesho, chofoza ekhasini lemininingwane bese ulithenga. Yenza lokhu ngokuphindaphindiwe uze ungaboni ukuthuthukiswa kokuqala. Umphumela walolu hlelo luzoxhomekeka ezintweni eziningana ezifana nesakhiwo sezindleko zomkhiqizo, isivumelwano esixoxisana ne-Amazon. njll.
Umthengisi Amandla amakhuphoni
Ungathola okulinganayo kwe-Amazon ngokuthengisa izinto ngezikhathi ze-Amazon Coupons. Kungaba imoto yokukhuthazwa ewusizo ngezizathu ezihlukahlukene. Amakhuphoni Amandla Amakethe athandwa phakathi kwamakhasimende. Yingakho bangathinta ngokuqinisekisayo ukuphakanyiswa komkhiqizo wakho kanye nesigaba sokuthengisa. Ungabhekana nabo ebhokisini legolide noma ezitolo zokuthengisa. Kunamakhonsoni ambalwa okwenziwe ukuze ukwazi ukuthuthukisa ukuvezwa kwemikhiqizo yakho ngisho ne-zero sales velocity.
Kulula ukuwasebenzisa nokuwaphatha njengoba ungadala amakhuphoni amandla omthengisi ngokwakho kumthengisi ophakathi. Ngaphezu kwalokho, ungaba nokulawula okugcwele kwesabelomali sakho. Amakhuphoni avuleka ngokushesha lapho isabelomali seliphelile. Enye inzuzo eyengeziwe ukuthi amakhuphoni amandla wamthengisi ayidingi izimali ezinkulu. Ungakwazi ukukhokhela izaphulelo futhi ukhokhe imali yokuhlengwa.
Inethiwekhi yomuntu siqu
Ukwandisa ukuthengisa kwakho nokuthuthukisa izinga lokuthengiswa komkhiqizo ohlwini lwezinto ezifunwa yi-Amazon, ungavele udale inethiwekhi yakho. Amadili angaphezulu onakho, okuphakeme uyobe ubeka phambili ekusesheni kwe-Amazon. Ngakho-ke, ungakwazi ukukhulisa ukuthengiswa kwesilinganiso ngokuthola ukuthengiswa okuphelele. Okokuqala, ungahlanganyela nabangani bakho nezihlobo ukuthenga izinto zakho. Ungaphinde uchithe imali yakho ngokwakho ezintweni bese uyisipho nje kubantu. Ngokwenza kanjalo, uzothola ibhola liguqa.
Imithombo yezokuxhumana kanye nokubhuloga
Amapulatifomu ezokuxhumana nabantu angasebenzisa njengemithombo yamathuluzi engeziwe emikhiqizo yakho ye-Amazon. Yingakho ukudala ama-akhawunti akho kumapulatifomu athandwayo asenhlalo njenge-Facebook, Instagram, Twitter, no-Pinterest. Lawa makhasi kufanele afake imikhiqizo yakho futhi ahlanganyele abasebenzisi ekuthengeni. Qinisekisa ukuthi ufaka isixhumanisi kuhlu lwakho lwe-Amazon kusihlokweni sekhasi. Udinga ukuvuselela njalo ulwazi kuma-akhawunti wakho wezokuxhumana ukuze ulondoloze umsebenzi womlandeli.
Kunengqondo ukudala ibhulogi evamile ezinikezele imikhiqizo yakho. Zenze isazi esiqaphelayo ngokudala izingcezu zokuqukethwe ezithakazelisayo nokucwaninga. Ngaphezu kwalokho, ungashiya ukuphawula kwakho kwamanye amabhulogi ahlobene noma izinkundla zengxoxo. Indlela ephumelelayo yokwenza ngcono ukuqwashisa kwe-brand yakho isithumela izivakashi. Ukuze ulondoloze isikhathi sakho ekusungulweni kwebhulogi yakho nokukhuthazwa, ungabambisana nabathonya abangaphakathi kwe-niche yakho.
Indlela eyodwa yokudala eyengeziwe yokwandisa ukubonakala komkhiqizo kuwebhu ukuthola ukukhangiswa kwemikhiqizo yakho ye-Amazon. Ungakha ukukhishwa kwezindaba noma ama-athikili bese ubathumela ezinhlanganweni zezindaba ngaphakathi kwe-niche yakho yemakethe. Uma unolwazi oluthile namashaneli wezindaba eziningi ezifana ne-TV, amaphephandaba, njll. , ungabacela ukuba bafake imikhiqizo yakho. Uma kungenjalo, ungakwazi ukukhokhela ukukhangisa kwemikhiqizo yakho kwimidiya ye-intanethi ngesixhumanisi ekhasini lakho le-Amazon.